Salama ry haingam-pandeha, eto izahay miaraka amin'ny rindranasa lalao Android ho anao rehetra, izay fantatra amin'ny anarana hoe Crashmetal. Izy io dia lalao hazakazaka fiara Android, izay manolotra fomba hazakazaka amin'ny Internet hilalao miaraka amin'ny namana sy mpilalao hafa eran'izao tontolo izao.
Araka ny fantatrao, ny e-sport dia iray amin'ireo sehatra tsara indrindra ho an'ny mpilalao. Ny lalao samihafa eny an-tsena dia manolotra serivisy ho an'ny mpampiasa mavitrika an-tapitrisany. Azonao atao ny mahita ny karazana lalao rehetra amin'ny Internet, fa mahita ny sasany amin'ireo tsara indrindra amin'izy rehetra. Noho izany, eto izahay miaraka amin'ity fampiharana mahafinaritra ity.
Io no lalao hazakazaka fiara tsara indrindra sy farany indrindra, izay manome traikefa amin'ny fotoana tena izy ho an'ny mpampiasa. Ny olona dia tia miaina fanamby sarotra, fanamboarana araka ny fomba fanaony, ary ny zavatra niainany rehetra. Noho izany, ity fampiharana ity dia manolotra izany rehetra izany, saingy tsy maintsy mandoa vola ianao mba hidirana amin'ireo endri-javatra tsara indrindra.
Saingy eto izahay miaraka amin'ny dikan-teny modded an'ity fampiharana ity, izay manaisotra ny fameperana rehetra. Izy io dia manome anao tànana ambony eo amin'ny mpifanandrina, izay ahafahanao mandresy mora foana ny hazakazaka rehetra. Misy endri-javatra mahavariana kokoa amin'izany, izay hozarainay aminareo rehetra. Noho izany, mijanòna miaraka aminay mandritra ny fotoana fohy ary diniho miaraka aminay izany.
Topimaso momba ny Crashmetal
Izy io dia fampiharana lalao Android, izay manome ny lalao hazakazaka fiara tsara indrindra amin'ny Internet. Manolotra hazakazaka an-tserasera izy io, izay ahafahan'ny mpilalao milalao miaraka amin'ny namana sy mpilalao hafa manerana izao tontolo izao. Ny mpilalao samihafa dia afaka milalao ity lalao ity ary mampiseho ny fahaiza-manaony amin'ny hafa.
Manolotra fiara samihafa izy, izay azonao vidiana na handresena. Ny safidy mividy dia mazava kokoa ny fahazoana miditra amin'ny fiara rehetra satria tsy maintsy mandany ora isan'andro ianao ary avy eo afaka mahazo tokana ianao mandritra ny volana. Ka ny fividianana no hany safidy, hahazoana fidirana amin'ny fiara.
Crash Metal Apk dia lalao hazakazaka, fa hahazo fiara ianao, izay tsy maintsy amboarinao ho fiara hazakazaka. Izy io dia manome ny fomba fanamboarana tsara indrindra, izay ahafahanao manao ny dianao haingana kokoa sy manintona kokoa. Izy io dia manolotra fanamboarana haingana, izay ahafahanao manavao ny moterao, camshafts, tsorakazo fifandraisana, crankshafts, turbo, turbocharger, sy ny maro hafa.
Ao amin'ny lalao ofisialy dia mila manokatra ambaratonga fanavaozana ianao, saingy amin'ny alàlan'ity kinova mod ity, ny ambaratonga sy ny dingana rehetra dia voavaha ary afaka ampiasaina. Mila mampihatra ny fanavaozana fotsiny ianao ary manomboka ny moteranao, avy eo mandresy. Dingana tsotra io, sa tsy izany?
Ka iza no hahasarika anao kokoa? Satria lalao an-tserasera izy io, noho izany, olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao no hijery fiara. Noho izany dia tsy maintsy ataonao manintona sy mamorona kokoa izy io, izay mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny mpilalao hafa.
The Lalao Mod manome customization lalina, izay ahafahanao manova ny endriky ny fiara rehetra. Azonao atao ny manova ny bumper, fender, jiro, satroka, ampinga aoriana, kodiarana, ary maro hafa. Fa tiako ny fanangonana Vinyl, izay manome endrika famoronana tsara indrindra amin'ny fiaranao.
Manome vola madinika volamena tsy manam-petra koa izy io, azonao ampiasaina hividianana vokatra. Noho izany, ampidino ity kinova ny lalao ity ary mahazoa fidirana amin'ny vokatra karama rehetra. Raha manana fanontaniana momba an'io ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Anaran'ny fonosana com.androeed.installer_com.stanislaw.CrashMetalGP
Google Play Store ny kinova voalohany amin'ity app ity, saingy eto izahay miaraka amin'ny kinova mod. Ny sasany amin'ireo endri-javatra lehibe an'ity fampiharana ity dia voalaza ao amin'ny fizarana etsy ambony, saingy misy maro hafa. Noho izany, hizara lisitra tsotra iray amin'ireo fiasa fototra izahay rehetra.
Vohay ny fiara rehetra
Vola volamena maimaim-poana
Manana lalao vitsivitsy hafa izahay, izay azonao atao ny mankafy mandritra ny filalaovana.
Raha te hampidina ilay kinova aloa ianao dia afaka mitsidika ny Google Play Store. Izahay dia mizara Crash Metal Mod Apk, izay azonao sintonina avy amin'ity pejy ity. Mila mahita ny bokotra fampidinana ianao, izay misy eo amin'ny ambony sy ambany eto amin'ity pejy ity.
Tsindrio ny bokotra ary hanomboka ho azy ny fisintomana. Raha vantany vao vita ny fisintomana dia mila manova ny toe-javatra ianao. Noho izany, mandehana any amin'ny Setting ary sokafy ny tontonana Security, avy eo checkmark 'Loharano tsy fantatra'. Aorian'ity fizotrany ity dia afaka mametraka azy eo amin'ny fitaovanao ianao.
Crashmetal Apk no lalao tsara indrindra hilalaovana fiara amin'ny namanao sy ny mpilalao hafa. Azonao atao koa ny manatsara ny fahaizanao milalao sy ny fisainanao famoronana. Izy io dia sehatra tsara hihaonana amin'ny olom-baovao amin'ny firenena samy hafa, koa sintomy ity fampiharana ity ary manaova fialamboly.
Sokajy Games, Foko Tags Crash Metal Apk, Crash Metal Mod Apk, Crashmetal, Lalao Mod Post Fikarohana